5XQS-10 Destoner ho an'ny soja vary vary sesame vato manala milina
Destoner dia ampiasaina hanesorana ny fahalotoana mavesatra (vato, fasika, bongan-tany) amin'ny akora.
5XZC-3B mpanadio sy mpanakitra voa
Ny mpanadio sy ny mpanadio voa dia lasa milina fanadiovana fototra sy ankafizina indrindra amin'ny indostrian'ny masomboly sy voamaina amin'ny tsena eran-tany, miaraka amin'ny fahombiazana ambony, fampisehoana tsara, fampiharana malalaka.
Separator cyclone vovoka
Modely mihetsiketsika mety ho an'ny fambolena, saha ary faritra lavitra
Miasa tsy miankina amin'ny ascenseur
Vidiny tsara ho an'ny fangatahan'ny tsena
Fahombiazana sy fahaiza-manao avo lenta
Fikarakarana voam-bary ho an'ny soja soja
Fahombiazana amin'ny vidiny
5XWM indented cylinder halavan'ny grader milina fanasokajiana
Ny 5XWM Series Indented Cylinder (Length Grader) antsoina koa hoe Grain Selecting Grader na Broken Grain Separator. Izy io dia manasokajy ny voa sy ny voa araka ny halavany, afaka manasaraka ny loto lava na fohy kokoa amin'ny akora granular.
Ny cylinders indented dia ampiasaina amin'ny fanombanana ny halavan'ny fitaovana granular rehetra toy ny varimbazaha, oat, buckwheat, voan-javamaniry, tapa-kazo avy amin'ny voan'ny tanamasoandro na siramamy betiravy, poti-plastika sns., ary koa amin'ny fitrandrahana ireo fangaro fohy na lava tsy ilaina.
5XZC-3DH mpanadio voa sy mpanakitra